Garbicha yoo muddaman qofaa waaman! Oromoo kun Siif galee? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGarbicha yoo muddaman qofaa waaman! Oromoo kun Siif galee?
Garbicha yoo muddaman qofaa waaman! Oromoo kun Siif galee?
Kun Itoophiyaa dha. Biyya salphoo! Namni wattaaddara ta’uuf, eenyummaa isa agatuu qabaa? Eenyummaa isaa gatee kan eenyuu akka fudhatuuf?
Kun ifaa dha. Afaan inni dubbatu Afaan Amaaraa ti; Aadaan ittiin jiraatu aadaa Amaaraa ti; Egaa, wattaaddara ta’uuf, eenyummaa ofii gatanii eenyummaa Amaaraa fudhachuun dirqama jechuu dha. Kun kanuma ture, amma illee kan jiru, egeres akka jiraatu barbaadamuu dha.
Oromoo fi saboonni cunqursaa jalaa bahuuf qabsaa’aa jiran filannoo lama qabu; tokko, sirna cunqursaa leellisu lagachuun qabsoo haqaa gaggeessuu dha. Lammata, sirna cunqursaa leellisu san keessa seenanii sirnicha keessaan jigsuu irratti hojajchuu dha. Kanaan ala sirna cunqursaa leellisu waliin waliigalanii hojjachuun ofiin of balleessuu dha.
Garbicha yoo muddaman qofaa waaman!
Oromoo kun Siif galee?
kan barreesse Biqilaa Amanuu Abbaashomaa
“Itoophiyaa kana Oromootu ijaare” jechuudhaan eenyuu ol kan dubbatu warra mootummaadha. Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda inni qabu garuu qabatamaadhaan kan ibsu lafa hin jiru. Baalchaa Saafoo, Qusee Dinagdee… isaan kun dura waamamu. Kabajaan jara kanaa gaafa muddama mootummaa qofa afaaniin dubbatama. Siidaan gootota Oromoo akka hin dhaabbanne taasifamaa jira.
Har’a garuu kan sirratti faarfamu, kan maqaan leellifamu, kan mallattoon yaadannoo handhuura biyyattiirra kaa’amu warra Oromoo ajjeese, saame, hidhe…dha.
Adeemsi kun badu malee araarri hin jiru; nagaan hin jiraatu!
Bilisummaan Oromoof urmaata dubbii ti.
Polisin Humni Adaa Oromia yaroo Amanta Kutalee Oromia kesaati Nama Heduu Hararge Dabate Ajesan Jiran